Mak 15 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) Emberá (Catío) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ozi Ọma Mak Dere 15:1-47
Jizọs gara n’ihu Paịlet (1-15)
E ji Jizọs mee ihe ọchị (16-20)
A kpọgidere Jizọs n’osisi na Gọlgọta (21-32)
Jizọs nwụrụ (33-41)
E liri Jizọs (42-47)
15 Ozugbo o ruru n’isi ụtụtụ, ndị isi nchụàjà na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ, ya bụ, ndị Sanhedrin* niile, gbara izu. Ha wee kee Jizọs agbụ, kpụrụ ya pụọ ma nyefee ya n’aka Paịlet.+ 2 Paịlet wee jụọ ya, sị: “Ị̀ bụ Eze ndị Juu?”+ Ọ zara ya, sị: “Ọ bụ gị kwuru ya.”*+ 3 Ma ndị isi nchụàjà nọ na-ebo ya ọtụtụ ebubo. 4 Paịlet malitere ịjụ ya ọzọ, sị: “Ọ̀ bụ na e nweghị ihe ị ga-aza?+ Ị́ naghị anụ ọtụtụ ebubo ha na-ebo gị?”+ 5 Ma e nweghị ihe ọzọ Jizọs zara. O wee ju Paịlet anya.+ 6 Mgbe ọ bụla a na-eme Ememme Ngabiga, Paịlet na-ahapụrụ ndị Juu otu onye mkpọrọ ha rịọrọ ka ọ hapụrụ ha.+ 7 N’oge ahụ, e nwere otu nwoke a na-akpọ Barabas. A tụrụ ya na ndị na-emegide ọchịchị mkpọrọ maka na ha gburu mmadụ* mgbe ha na-agba ọchịchị mgba okpuru. 8 Ìgwè mmadụ bịara malite ịrịọ Paịlet ka o meere ha ihe ọ na-emere ha. 9 Ọ sịrị ha: “Ùnu chọrọ ka m hapụrụ unu Eze ndị Juu?”+ 10 N’ihi na Paịlet ma na ọ bụ anyaụfụ mere ndị isi nchụàjà ji nyefee Jizọs n’aka ya.+ 11 Ma ndị isi nchụàjà ahụ mere ka ìgwè mmadụ ahụ mewe aghara ka ọ hapụrụ ha Barabas, kama ịhapụ Jizọs.+ 12 Paịlet gwara ha ọzọ, sị: “Gịnịzi ka m ga-eme onye unu na-akpọ Eze ndị Juu?”+ 13 Ha tiri mkpu ọzọ, sị: “Kwụwa ya n’osisi!”*+ 14 Ma Paịlet gwara ha, sị: “Maka gịnị? Olee ihe ọjọọ o mere?” Ma ha tikwuru mkpu, sị: “Kwụwa ya n’osisi!”*+ 15 Paịlet wee hapụrụ ha Barabas n’ihi na ọ chọrọ ime ihe dị ìgwè mmadụ ahụ mma. Mgbe o mechara ka a pịa Jizọs ụtarị,+ o nyefere ya n’aka ha ka e gbuo ya n’elu osisi.+ 16 Ndị agha wee kpụrụ ya banye na mbara èzí, ya bụ, n’ụlọ gọvanọ. Ha kpọkọtakwara ndị agha niile.+ 17 Ha yiwere ya ákwà na-acha pọpụl, jirikwa ogwu kpaa okpueze kpuwe ya n’isi. 18 Ha malitekwara ịsị ya: “Eze ndị Juu, ndeewo!”+ 19 Ha na-akụkwa ya okporo osisi amị n’isi ma na-agbụ ya asọ mmiri. Ha gbukwara ikpere n’ala kpọọrọ ya isiala. 20 N’ikpeazụ, mgbe ha kwachara ya emo, ha yipụrụ ya ákwà pọpụl ahụ ma yiwe ya uwe elu ya. Ha wee kpụrụ ya pụọ ka ha kpọgide ya n’osisi.+ 21 Ha manyekwara otu onye na-agafe agafe aha ya bụ Saịmọn, onye Saịrini, ka o buru osisi ịta ahụhụ* Jizọs.+ O si n’ime ime obodo na-abịa. Ọ bụ nna Alegzanda na Rufọs. 22 Ha wee kpọta Jizọs n’ebe a na-akpọ Gọlgọta, nke pụtara, “Ebe Okpokoro Isi.”+ 23 N’ebe a, ha gbalịrị ka ha nye ya mmanya a gwakọtara ya na mea na-egbu egbu.+ Ma ọ ṅụghị ya. 24 Ha wee kpọgide ya n’osisi. Ha fekwara nza kee uwe elu ya ka ha mara onye ga-achịrị nke ọ ga-achịrị.+ 25 Ọ bụ n’awa nke atọ.* Ha wee kpọgide ya n’osisi. 26 E dere ebubo e boro ya n’osisi ahụ, ya bụ: “Eze ndị Juu.”+ 27 A kpọgidekwara ndị ohi abụọ n’osisi n’akụkụ ya, otu n’aka nri ya, otu n’aka ekpe ya.+ 28 *⁠—— 29 Ndị na-agafe agafe nọ na-akparị ya, na-efufe isi,+ na-asị: “Tụfịa! Gị onye ga-akwatu ụlọ nsọ ma rụghachi ya n’ụbọchị atọ,+ 30 si n’osisi ịta ahụhụ* rịdata ka ị zọpụta onwe gị.” 31 Otú ahụkwa ka ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ nọ na-akwa ya emo, na-asị: “Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma o nweghị ike ịzọpụta onwe ya.+ 32 Ka Kraịst, Eze Izrel, si n’osisi ịta ahụhụ* rịdata ugbu a, ka anyị hụ ma kwere.”+ Ndị ahụ a kpọgidere n’osisi n’akụkụ ya nọkwa na-akparị ya.+ 33 Mgbe o ruru awa nke isii,* ọchịchịrị gbara n’ala ahụ niile ruo n’awa nke itoolu.*+ 34 N’awa nke itoolu, Jizọs tiri mkpu n’oké olu, sị: “Eli, Eli, lama sabaktani?” nke pụtara: “Chineke m, Chineke m, gịnị mere i ji hapụ m?”+ 35 Mgbe ụfọdụ n’ime ndị guzo nso nụrụ ya, ha malitere ịsị: “Lee, ọ na-akpọ Ịlaịja.” 36 Otu onye wee gbara ọsọ mikpuo ogbo n’ime mmanya gbara ụka, dokwasị ya n’okporo osisi amị. O nyere ya Jizọs ka ọ ṅụọ+ ma sị: “Hapụnụ ya! Ka anyị hụ ma Ịlaịja ọ̀ ga-abịa kpọdata ya.” 37 Ma Jizọs tiri ezigbo mkpu wee nwụọ.*+ 38 Ákwà mgbochi* nke dị n’ụlọ nsọ+ dọwakwara ụzọ abụọ si n’elu ruo n’ala.+ 39 E nwere otu onyeisi ndị agha nke guzo chee Jizọs ihu. Mgbe ọ hụrụ ka ihe ndị a mere mgbe Jizọs nwụrụ, ọ sịrị: “N’eziokwu, nwoke a bụ Ọkpara Chineke.”+ 40 E nwekwara ụmụ nwaanyị ndị nọ n’ebe dịtụ anya na-ele ihe na-emenụ. Ụfọdụ n’ime ha bụ Meri Magdalin, Meri nne Jems nke Nta na Josis, nakwa Salomi.+ 41 Ha na-eso Jizọs ma na-ejere ya ozi+ mgbe ọ nọ na Galili. E nwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ n’ebe ahụ bụ́ ndị ya na ha so gbagote Jeruselem. 42 Mgbe o ruwere mgbede, ebe ọ bụ ụbọchị e ji akwadebe maka Ụbọchị Izu Ike, ya bụ, ụbọchị ga-abọta Ụbọchị Izu Ike, 43 Josef onye Arimatia bịara. O so ná ndị a na-akwanyere ùgwù n’ụlọikpe kacha elu nke ndị Juu.* Ọ nọkwa na-eche ka Alaeze Chineke bịa. Ọ katara obi gakwuru Paịlet ma rịọ ya ka e bunye ya ozu Jizọs.+ 44 Ma Paịlet chọrọ ịma ma Jizọs ọ̀ nwụọla, ya akpọọ onyeisi ndị agha ahụ, jụọ ya ma ọ̀ nwụọla. 45 Mgbe ọ chọpụtara n’aka onyeisi ndị agha ahụ na Jizọs anwụọla, o nyere Josef ikike ka o buru ozu ya. 46 Mgbe Josef zụtachara ezigbo ákwà linin ma budata ozu Jizọs, o ji ezigbo ákwà linin ahụ fụchie ya ma lie ya n’ili*+ e gwuru n’oké nkume. O wee kwara otu nkume kwachie ọnụ ili ahụ.+ 47 Ma Meri Magdalin na Meri nne Josis nọ na-ele anya n’ebe ahụ e liri ya.+
^ Ihe a bụ akpaala okwu ndị Juu nke na-egosi na mmadụ kwetara ihe e kwuru.
^ Ma ọ bụ “gburu ọchụ.”
^ Ma ọ bụ “Gbuo ya n’elu osisi!”
^ Ya bụ, ihe dị ka n’elekere itoolu nke ụtụtụ.
^ Ya bụ, ihe dị ka n’elekere iri na abụọ nke ehihie.
^ Ya bụ, ihe dị ka n’elekere atọ nke ehihie.
^ Ma ọ bụ “kubie ume.”
^ Ákwà mgbochi a dị n’agbata Ebe Kacha Nsọ na Ebe Nsọ.
^ Ma ọ bụ “na Sanhedrin.”